I-8 yeHamptons yeRente yeRente ukuya kwiNcwadi ASAP - Uhambo
Kwenziwa Kanjani Impilo Abahlobo Nosapho Iinwele Izilwanyana Zasekhaya Iiresiphi Iindlela Iincwadi Umindiya Kufuneka Ubone
I-8 ye-Hamptons Rentals zasehlotyeni ezingekahluthwa okwangoku
Ihlobo lisondele kwikona kwaye kukhutshwe isitofu sokugonya kakuhle, usenokucinga ngokuhlengahlengisa uhambo lweHamptons oluye lwarhoxiswa kunyaka ophelileyo. Kodwa ukuze ube nelona hlobo lakho lihle, kuyakufuneka ubhukishe irente oyifunayo. Ngethamsanqa, akukashiywa lixesha lokutsiba kwenye yezi ndawo ziphambili, ukusuka kwiipropathi ezinkulu zamaqela ajonge ukungena kwisabelo sehlobo ukuya kuncinci (funda: ngokufikelelekayo ngokufikelelekayo) ezindlwini ezilungele ukubuyela umva ngokusondeleyo nomhlobo okanye ezimbini. Jonga iindawo ezimbalwa zokuqeshisa iiHamptons apha ngezantsi.
Inqaku lomhleli: Nceda ukhumbule ukuziqhelanisa neenkqubo zokuhamba-hamba kwezentlalo ngelixa useluhambeni kwaye ujonge kwabasemagunyeni izikhokelo ezisempilweni nezikhuselekileyo.
Ezinxulumene: U-Van Gogh otyibilikayo kunye no-6 obunye uBugcisa obuBalaseleyo obuza kwi-NYC kweli hlobo
1. IMITHI YAMANZI (SLEEPS 8)
Le ndlu yaselunxwemeni yentloko enophahla enephuli yabucala ifanelekile nge-Insta, uya kufuna ukwenza ifoto. Iyavuza ifanitshala ye-chic kunye nobugcisa bale mihla ngaphakathi. Kukho ikhitshi elikhulu labo bafuna ukuyipheka, kunye nebar emnandi, enemibala ye-wannabe mixologists. Ukuba ungazikhupha kule stunner, yiya eScott Cameron, eMecox naseSagg Main.
2. EMPUMA HAMPTON, EMANTSHONA HARBOR (ULELE 6)
Le ndlu intle yolwandle yamaplanga yenzelwe ukonwatyelwa, inendawo entle yokutyela ngaphandle ejikelezwe yiveranda egutyungelwe ngumdiliya. Indlu le yeyompheki, ke ungakholelwa ngcono ukuba ikhitshi lenzelwe ubuchwephesha-inezitovu ezithandathu zokutshisa isitovu iViking, isitya sokuhlambela izitya seViking kunye nefriji yaseNorthland. Imithi kunye nemibala ye-burgundy iyayigxininisa indlu, kunye nophahla lwayo oluphezulu, kunye nendawo entle yomlilo wamatye. Ilali yase-East Hampton luhambo olukhawulezayo lokuhamba.
3. MONTAUK (ULELE 15)
Indlu yosapho emhlophe kunye nesilayiti engwevu yiyo yonke loo nto malunga neembono zamanzi, eli khaya lihle libekwe kanye kwiLake Montauk, ukuze ubambe amaza aqaqambileyo nangaliphi na ixesha losuku. Yonwabela usuku olonqenayo olujikeleze iphuli engapheliyo okanye ukuba uyayiva, bamba iibhodi zeephedi kunye neekayaks (indlu iza nazo!) Kwaye ujikeleze ichibi. Qaphela: Oku kugrogriswa okumangalisayo kwenziwa kunye neentsapho engqondweni (inene, akukho maqela e-bachelor okanye e-bachelorette avunyelwe sisicelo sabanini).
4. I-HAMPTON EMPUMA (SLEEPS 8)
Le ndlu yenzelwe uyilo kunye noyilo loyilo. Siphila kwinkangeleko yanamhlanje yenkulungwane kwaye olu luhle, olunzulu lwaselwandle oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nendlu egudle ulwandle eneempawu zomthi eziyilwe ngumakhi owaziwayo uCarl Koch uwabetha onke amanqaku. Inemigca yokubalisa yejometri, iifestile ezinkulu kunye neengcango zeglasi ezityibilikayo ukuze kungene ukukhanya okuninzi. Igumbi lokuhlala (elinendawo yokubasa umlilo), ikhitshi, kunye namagumbi okulala anele kwaye anomoya, ngoko ke wena kunye neqela lakho anizukuziva nxinekile ngaphakathi kukonke. Ukuba uziva ungafuni ukujinga kumgangatho osongekileyo osongelweyo ngehamoku, indawo yokuphumla ngasedamini elingqongwe zizitulo zeti. Emva kosuku lokuphumla, thatha uhambo olufutshane phantsi kwendlela yokufika kulwandle lwakho lwabucala eLion Head Bay ukonwabela ukutshona kwelanga kweHampton.
5. EMPUMA HAMPTON (ULELE 10)
Ixesha lokuqala ukucwangcisa iqela lakho elimhlophe likaHolton (ngelixa ugcina izikhokelo zokuphambuka koluntu, kunjalo). Le ndlu yolwandle mihle kwaye ivulekile iyigcina ilula kunye ne-chic ngombala omhlophe, isleythi engwevu kunye neblue kulo lonke ikhaya. Inophahla olukhulu lokugcina igumbi lokujonga imovie, itafile yebhilidi, indawo yokuzivocavoca kunye negumbi lezemidlalo. Kwaye inazo zonke iintlobo zamachibi amahle: i-sauna, ichibi elishushu langaphandle kunye neshawa yomphunga.
6. UMZANTSI HAMPTON (ULELE 12)
Siqinisekile ukuba le ndlu kufuneka ibe kwimagazini yoyilo lwangaphakathi. Le nto ifikelelekayo (ngokwemigangatho yeHamptons, oko kukuthi) kodwa ukufumanisa okuhle kulungele iintsapho. Iqhayisa ngonxweme loluntu lwabucala, ichibi lamanzi anetyuwa kunye neenkundla zentenetya kunye nebhasikithi. Ikwafumaneka kufutshane neapile okanye ukukhiwa kwamathanga kunye nezidiliya.
7. UMZANTSI HAMPTON (ULELE 9)
Indlwana emnandi eyindlela nje yokuhamba ngokukhawuleza ukuya kulwandle lwePeconic Bay. Kuvakala ngokungathi le * inokuba yindlu yakho, ene-rustic engaphezulu, ukuhlala ngaphakathi kunepalati esezingeni eliphakamileyo, iiHamptons ezinkulu zimba (ukuba yile nto uyifunayo). Inayo indawo yokubhukuda, ikhohlisiwe ikhitshi kunye neendawo zokubasa umlilo nangona, kuba, kulungile, ziiHamptons
8. EMPUMA HAMPTON (USLEEPS 12)
I-Alpine ski-chalet yanamhlanje iyashukuma, kodwa yenze ibe yiHamptons. Sijonge kanye kule fomathi yomgangatho ovulekileyo kwaye sasirhawuzelela ukuyibhukisha. Inoluvo lweScandinavia olwenza ukuba luzive luhlazeke kakhulu kungakhathalekile ukuba leliphi ixesha lonyaka. Kukho ikhitshi eliphekiweyo, iphuli, ibhafu ye-clawfoot kwaye ikufuphi ne-East Hampton Village, iSag Harbour, kunye neWainscott Beach.
Ezinxulumene IINKCUKACHA ZE-10 EZINGASETYENZISWANGA NGAPHAMBI KWE-NYC (NJENGOKO, NGAPHAKATHI KWIYURE EZIMA-2
Ngaba ufuna ukufumana izinto ezinkulu zokwenza ihlobo? Bhalisa kwincwadana yethu apha .
Izigaba Impilo Uphononongo Lweemovie Izilwanyana Zasekhaya
qoutes kunyaka omtsha
indlela yokwenza amashwamshwam alula
ukuzivocavoca ukunciphisa amanqatha esisu
iinwele ezithe tye kunye nobuso obu-oval
ishampu kunye nesixhobo sokulungisa iinwele ezigobileyo